Uma sekugcineni olungaphambili lwesonto unquma ukusebenzisa zamapulangwe, kubalulekile ukuqala ukuze wehlise umoya.
Definition of the panel main
Uma ukucabanga nendlela ukubala zamapulangwe, kuyodingeka ukuthi uqale ukuze udale umdwebo yendlu, okuyinto kufanele bakhombise bonke osayizi. Ukuze anqume inani kudingekile ukuchaza original ulwelwesi ngombala indawo square metres, lo ububanzi kufanele iphindwe ubude. Ngemva kwalokho, endaweni ubhekwa ephaneleni ubuchwepheshe obufanayo, futhi Inani lokuqala lihlukaniswe by wesibili - izonikeza inani zamapulangwe iyunithi umsebenzi. Wena lesi siyalelo ke zamapulangwe uzobe labawatfolile esifundvweni nobe ubuningi kudingekile ukuba kusetshenziswe. Lapho ekwenzeni izinkokhelo akufanele ilibaleke ukuthi yonke leyo ndawo izindonga kubalulekile ukuze asuse endaweni ukuvuleka. Endaweni surface siphelile ngemva nekususa le apertures kumele kunyuke ngo-7 per cent - ngaleyo ndlela akwazi ukuba acabangele imfucuza nomshado. Ukucacisa inombolo yokugcina panel kudingekile ukuba kwahlukaniswe endaweni ewusizo odongeni endaweni eyodwa sewebhu.
Ukubalwa ubude amaphrofayli sokuqala
Uma ukucabanga nendlela ukubala zamapulangwe, kubalulekile ukunquma ubude amaphrofayli sokuqala. Lezo zinto strip kokuqala. izingxenye ezinjalo ezisetshenziswa njengeziwusizo iziqobosho lokukhuphula ephansi uqimba kuphela. ukuqala amaphrofayli obuphelele kumele ibekwe ngamamitha ukugijima, futhi leli nani ibalwa esekelwe ukwakhiwa azungezwe. Ngu ubude ezidingekayo ukuze ungeze obuphelele Izindawo docking panel kanye ukufakwa yabo ukuze uqhubeke. Inani okuholela lihlukaniswe by ubude izingxenye iphrofayli. Ngakho uzokwazi ukucacisa inombolo imigoqo sokuqala amayunithi ofuna ukuthenga izinto zokwakha emakethe.
Ukunqunywa ubude amaphrofayli nama-engeli
Uma udinga ukwazi ukuthi ukubala zamapulangwe, kuyoba kubalulekile ukunquma ubude engeli kanye amaphrofayli, lona wamuva kwako injongo ehlukile. Esigabeni esilandelayo kubalulekile ukucacisa ukuthi bangaki amamitha kwakudingeka emagumbini yangaphandle uzobe. Ngokuvamile, izakhi idatha ayatholakala nge ubude 3 m. Ukuze afeze ukubala kwabo ezinconywe ucezu, ngokuhlonipha kaningi amakhona izakhiwo. engele zangaphakathi kubalwa ngendlela efanayo. Kubalulekile ukulindela yokuxhuma amaphrofayli. Phakathi kwabo kukhona H emise okwenyanga T-. Ngenxa yokuthi panel saydingovye abe obuphelele okuyinto ingeqi 3.8 amamitha, ngeke akwenze ngaphandle kokusebenzisa izakhi ezifana.
H emise iphrofayela abe nobude 3 metres. Ngenxa yalesi sizathu, kubalulekile ukuba alinikeze ukubala inombolo yezinto ngamunye ngamunye. Lapho sibhekene umsebenzi phambi kwakho, indlela ukubala zamapulangwe ke esigabeni esilandelayo kuyodingeka anqume inani emapheshana kokuphothula. Ubuchwepheshe inikeza orientation ovundlile ngaphansi ukuvuleka ifasitela phezulu. Uma usebenzisa amaphrofayli ekhethekile ewindini, uqede ibha kufanele ogibele azungeze yalo. Ukuze umnyango Ukunquma ukuba kusetshenziswe priokonnye emapheshana, inani okuyinto kunqunywa azungezwe we apertures. Kodwa le ndlela isetshenziswa kuphela lapho ekhosombeni akuyona ezingaphezu kuka-18 amasentimitha. Ngenxa yokuthi izici idatha abe ubude ngamamitha 3 noma ngaphezulu, ukubala kumele kwenziwe ngabanye obandayo imisebenzi azihloselwe ukusetshenziswa ezilahliwe.
Uma udinga ukubala inani zamapulangwe futhi kwenze kube ufuna ekhaya, kubalulekile ukwazi ukuthi wawungakanani olulodwa lwamapulangwe. abakhiqizi ezahlukene kungase kungabi usayizi ofanayo, Nokho, ngokuvamile ukuchema unamahlangothi ngaphakathi 3660 * 230 mm. Lezi ongakhetha ukuvumela ukuba kutholakale indawo kwethimba olulodwa. Izindleko zamapulangwe futhi kungaba ezahlukene, kodwa uyahluka ruble 170 iyunithi ngomkhiqizo ngamunye.
Umsebenzi wokulungiselela ngaphambi kokufakwa
Uma ukwazile ukubala inani zamapulangwe, ungakwazi uqhubekele yomsebenzi wokulungiselela endaweni izindonga. Bayobizwa siqondile. Uma ufuna ukudlulisa igama elithi lempilo zamapulangwe ukuthi kuyiqiniso ikakhulukazi leyo nto vinyl, wonke umsebenzi ukufakwa Kunconywa ukwenza phezu impahla nangokuvikela, okuyinto evimbela nokuxhumana izindonga umswakama. Kulezo zindawo lapho impahla yokuqedela kuzoba ukuthintana ngesitini, itshe noma kakhonkolo, kubalulekile ukwehlukanisa kuye. Uma isakhiwo isivele eziqhutshwa, kubalulekile ukususa izakhi Uzithukululile olungaphambili lwesonto bese ushintsha izingxenye ezibolile.
Ukunqunywa uphawu kokuqala
Ngenxa yokuthi usuvele ukwazi ukuthi ukubala zamapulangwe ngoba indlu, ungakwazi uqhubekele ukulungiswa izindonga kanye ukuthola kuqalwa. Uma sikhuluma isakhiwo esetshenziswa kumele yentiwe ne asezindongeni ubudala, panel ingafakwa okufanayo umhlangano line kuphela. Ngokunjalo uma uzosebenzisana isakhiwo esisha, nendawo ngamakhasimende umugqa wokuqala kumele amboze unqenqema isisekelo. Ukuze ukwazi ukubona the starting line, okumele ibekwe nendawo, yokulinganisa ukuqonda kufanele lisetshenziswe nini.
Ukufaka izingxenye ezengeziwe
Ngaphambi kokuqala iwizadi kuphela kumelwe ufunde indlela ukubala zamapulangwe izinto eziyizidingo zendlu. ukuqhuba lezi imisebenzi ngenhla iziyalezo. In the isinyathelo esilandelayo ungakwazi uqhubekele ukufakwa izingxenye, phakathi kwabo kukhona emagumbini bangaphakathi nabangaphandle, Ukunquma, bese uqale band. Ngemva kwalokho - sikulungele ukufaka iphrofayli. Kubalulekile ukuthi ibanga phakathi engela isihloko kanye cornice 6.4 milimitha.
Izici ukufakwa zamapulangwe
Uma unquma ukhetha kokuqeda zamapulangwe endlini iphaneli Ubukhulu kumele ukwazisile ngaphambi kosuku lokuthenga. Manje ungaqala ukufakwa panel lokuqala, okumele angabekwa sisebenzisa izinga umoya. It kuzoncika ngokunemba indawo zonke izakhi elandelayo.
Ngemva irowu umngcele lokuqala selitholakele, ububanzi kungenziwa kuphawulwe iphaneli kokuqala, kokuba surface olungaphambili lwesonto umugqa flat ovundlile. Kusebenza njengomnyombo Umhlahlandlela lokukhuphula onqenqemeni engenhla sephrofayela isiqalo. Phakathi imiphetho emapheshana eduze kumele ahlelwe ukushiya igebe whose banzi ilingana 12.7 mm. Siding, usayizi okuye kushiwo ngenhla, ezivela abakhiqizi ezahlukene kungase kudingeke nemingcele ezahlukene. Kubalulekile ukuba acabangele lapho yokunquma inani impahla.
Izinto zokuvala umoya kwamafasitela neminyango
Isinyathelo esilandelayo kuyoba ukufakwa izingxenye ukuvuleka. Ukuze wenze lokhu kuyodingeka ufake ukulungisa, Sills futhi priokonnuyu ibha. izicezu kumele abhanqiwe engela okuyinto 45 degrees - lokhu kuzokunika ngendlela ehloniphekile of isakhiwo sonke.
izincomo professional ukufakwa zamapulangwe
block endlini Siding isethwe ku isimiso esifanayo ukuthi kuchazwa kulesi sihloko. Umsuka ngombala phansi ukufakwa ezidingekayo, ezihambayo kusukela ukuqala strip. Amajaji kufanele ifakwe iphrofayli kokuqala, bese abethelwe. Noma kunjalo, akudingeki ukuba amaphuzu yonke indlela. Kulezo zindawo lapho zamapulangwe ixhunywe izingxenye, kubalulekile ukushiya igebe uhla 6-12,5 mm. I panel okumele asetshenziswe phezu nomunye phezu 1/2 uphawu endaweni yokukhanda.
Ngokuhamba umsebenzi kumele asetshenziswe imfundo, kuyilapho zamapulangwe oyohlala isikhathi eside. Ngesikhathi esigabeni sokugcina kubalulekile ukusungula amaphrofayela ukuvuleka. Ngaphansi emaphethelweni ophahla kubalulekile ukusebenzisa lonke panel, okuyinto ngeke linqunywe. Kwangezikhathi kungenziwa ukusika kuphela ezimweni lapho ukufakwa wenziwa phezu pediments. Uma ukucabanga nendlela sheathe zamapulangwe olungaphambili lwesonto, irowu lokugcina ovundlile kumele sigcwaliswe J-Iphrofayela, ngezinye izikhathi Limiselelwe ipuleti aliqede. Kuyadingeka sokukhipha amanzi kusukela ekwakhiweni kophahla.
Bodibar - kuyini? Bonisa nge bodibarom